Nhau - Zvigadzirwa zvitsva zvakagadzirwa
Rori Auto Zvikamu
Volvo Auto Zvikamu
Scania Auto Zvikamu
Man Auto Zvikamu
MB Auto Zvikamu
DAF Auto Zvikamu
Iveco Auto Zvikamu
Renalut Auto Zvikamu
Hino Auto Zvikamu
Hyundai Auto Zvikamu
Bhazi Auto Zvikamu
Mota Auto Zvikamu
Zvigadzirwa zvitsva zvakagadzirwa
Daihatsu brake wheel cylinders 47550-87304, 47560-87302, 47570-87304, 47580-87302,47510-87304, 47520-87301, 47530-87304, 47540-87301 uye clutch master cylinder 31410-87322 zvakagadzirwa munaGunyana, 2020. Daihatsu chinhu chitsva chemoto auto zvikamu kwatiri, zvakanaka kwazvo.
Iko kukosha kwekuvandudza kwechigadzirwa chitsva mhedzisiro yekukosha kwekugadzira zvigadzirwa zvitsva kana bhizinesi richizorarama. Mune mamwe mazwi, kuvandudzwa kwechigadzirwa chitsva kunosungirwa pakukwanisa kwebhizimusi kuramba ichikwikwidza uyezve nekureba kwenguva yebhizinesi rakadai. Chero bhizimusi risingazive kukosha kweyakagadzirwa nyowani chigadzirwa harigare kwenguva refu semhedzisiro yekuti bhizinesi ndere zvese nezveungwaru uye shanduko, zvichiita kuti zvive zvakakosha kuti mabhizinesi achinjane neshanduko idzodzo kuti dzirambe dzakakodzera. Chigadzirwa chitsva chinogadzirirwa chinogona kuve chakanangana nekufungisisa kweiyo pfungwa nyowani maererano nemutsara mutsva wezvigadzirwa parizvino zvisiri mumusika, kana zvinogona kuitirwa kusimudzira zvigadzirwa zvinogona kunge zviri mumusika kare. Chero zvazvingava, kuvandudzwa kwezvigadzirwa zvitsva chikamu chakakosha chekushandisa kwemaitiro ebhizinesi nemakambani.
Muenzaniso wekukosha kwekusimudzirwa kwechigadzirwa chitsva unogona kuonekwa munzvimbo yeshanduko kubva kumabhuku epanyama kuenda kue-mabhuku. Mamwe makambani akavaka mukurumbira wavo uye kunyangwe kambani yavo yese pakutengesa mabhuku enyama akakurumidza kupetwa nekuda kwekuti vakatadza kuona kukosha kwekugadzirwa kwechigadzirwa chitsva. Aya makambani haana kutevedzera shanduko mune dzimwe nzvimbo dzemusika, zvakadai sehunyanzvi hwetekinoroji zvakaita kuti zvive nyore kuti vanhu vatore mabhuku mumudziyo pane kuti vatenge bhuku chairo. Mamwe makambani akagamuchira kuvandudzwa kwechigadzirwa chitsva akafungidzira shanduko iyi uye haana kungoita kuti vatengi vakwanise kurodha pasi mabhuku kubva paWebhu saiti, asi zvakare vakabatanidza kudhanilodha uku pamwe nevaverengi vavo vemagetsi, kuchiita iro rakazara package. Kunzwisisa uku kwekukosha kwekusimudzirwa kwechigadzirwa chitsva kwakachengetedza makambani akadaro akakodzera kunyangwe pakatarisana nekuvandudzwa kwazvino mukugadzirwa kwetekinoroji uye zvido kana zvido zvevatengi. Mumwe mufananidzo wekukosha kwekusimudzirwa kwechigadzirwa chitsva uri munzvimbo yemafoni smart uko mamwe makambani akwanisa kuzvisimbisa sevatungamiriri vemisika nekuda kwekuti vanogara vachitungamira muzvigadzirwa zvitsva. Makambani akadai anogara achiuya nezvigadzirwa zvitsva nguva nenguva, zvichinyatso kujeka kana zvigadzirwa zvavo mumusika zvava kutosvika kumagumo ehupenyu hwechigadzirwa. Nekutsiva zvigadzirwa zvakasakara nezvitsva, ivo vanokwanisa kuchengetedza kufarira kwevatengi uye kuita kuti chigadzirwa chavo nekambani zvive zvine chekuita.
Ningbo ZODI Auto Spare Zvikamu Co., Ltd.
Kero: Kwete 6 Lixin Road, Xiaogang Maindasitiri Nzvimbo, Tongtu Road, Ningbo, Zhejiang, China
Runhare: 0086-574-8619 1883